ဘ၀ခရီးတစ်ခု၏ ခံစားမှုပုံရိပ် မှတ်တမ်းလေးများ (လင်းလက်ကြယ်စင်): TAG TAG တက်ကြစို့ ..
အခုတစ်လော ဟိုဘလော့ခ်သွားလည်း တက် ၊ ဒီဘလော့ခ်သွားလည်း တက်ဆိုတော့ ဘာပါလိမ့်ဆိုပြီး အံ့သြမိပါတယ် .. ။ လင်းလက်နာမည်က ဟိုနေရာမှာ တက်ခိုင်း ၊ ဒီနေရာမှာတက်ခိုင်းဆိုတော့ မသိဘဲ လျှောက်တက်မိရင် ချော်ကျပြီး ငါတော့ အရှက်ကွဲရချည်ရဲ့ဆိုပြီး ပထမဆုံး လိုက်လေ့လာရပါသေးတယ် :D ။ ညလေးဘလော့ခ်မှာလည်းတက်ခိုင်း ၊ ကိုမျက်လုံးကလည်း တက်ခိုင်းဆိုတော့ ငါလည်းတက်မှပဲလို့ .. ။ 10 weird things about me ဆိုတဲ့ Tag ဂိမ်းအကြောင်း။ ကိုပြောတာပါနော် .. တမျိုးမထင်ကြပါနဲ့ … ။
၁) ကျောင်းစာကျက်ချိန်နည်းသလောက် မဂ္ဂဇင်း ၊ ၀တ္ထု ၊ ပုံပြင် ၊ ကာတွန်း အခြားစာအုပ်မှန်သမျှကို ဖတ်ရတာ ပိုကြိုက်ပါတယ် :D ။ စာရေး ၊ စာဖတ်ကို ၀ါသနာသိပ်ခုံမင်သလို အိမ်လှလှလေးတွေပုံစံကိုကြည့်ရတာ ကြိုက်ပါတယ်။
၂) စိတ်နည်းနည်းဆတ်ပါတယ် .. ။ တော်ရုံကိစ္စနဲ့ စိတ်မဆိုးတတ်ပေမယ့် ဒေါသထွက်အောင်လုပ်သူကိုတော့ စိတ်ထဲမှာ နာတတ်ပါတယ် ။
၃) အလှပတအားကြိုက်ပါတယ် ။ အလှပနဲ့ပတ်သတ်တဲ့စာတွေ ဖတ်ရမယ် ၊ ရှော့ပင်းထွက်ရမယ်ဆိုရင် တနေကုန် ထမင်းမစားရလည်း ပြဿနာမရှိပါဘူး ဟိးဟိး တကယ်ပါ မယုံရင် ကိုကို့ကိုမေးကြည့်။
၄) ညစ်ပတ်တာကို မကြိုက်ပါဘူး .. ။ အဆိုးဆုံးက လင်းလက်က တအားရွံတတ်ပါတယ် (အားနည်းချက်ပါ)။ စကားနဲ့တောင် စလို့မရပါဘူး .. ။ သာမန်ရွံစရာမဟုတ်တာကိုတောင် ရွံတတ်တဲ့အကျင့်ရှိပါတယ်။ အဲဒါကြောင့်လည်း ခဏခဏ အစခံရပါတယ်။
၅) ပန်းလေးတွေကို တအားကြိုက်ပါတယ် (ခွေးသေးပန်းမပါ)။ နှင်းဆီပန်း ၊ စံပယ်ပန်း ၊ ပိတောက် ၊ သစ်ခွ ၊ ခရေ အကုန်ကြိုက်ပါတယ်။ နှင်းဆီအဖြူကိုလည်း အေးမြစွာချစ်သလို ဆူးအပြည့်နဲ့ နှင်းဆီရဲရဲကိုလည်း သိပ်ကြိုက်ပါတယ် .. ။ သစ်ခွလေးတွေကို မြတ်နိုးသလို မွှေးပျံ့စွာကြွေပေးတဲ့ ခရေပန်းကိုလည်း ကြိုက်ပါတယ် ။။ စကားဝါဖြူဖြူလေးတွေကိုဆိုရင် သိပ်ချစ်ပါတယ်။
၆) အတင်းပြောတဲ့မိန်းမတွေ ၊ မိန်းမလိုမိန်းမရ အကျင့်ရှိတဲ့ ယောက်ျားတွေ ၊ အမည်မထုတ်ဖော်ဘဲ တိုက်ခိုက်သူတွေ ၊ ရှေ့တစ်မျိုး နောက်တစ်မျိုးပြောတဲ့လူတွေနဲ့ မပေါင်းပါ။
၇) လူတွေတော်တော်များများကို နားလည်ပေးဖို့ ကြိုးစားနေပေမယ့် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်တော့ နားမလည်နိုင်သေးပါဘူး (မရူးဘူးနော် အကောင်းရှိသေးတယ်)။
၈) လူကြီးဆန်တယ် ၊ လူကြီးပုံစံနေတာကို နှစ်သက်ပေမယ့် အိပ်ခန်းထဲမှာ အရုပ်တွေအများကြီးထားရတာကို ကြိုက်ပါတယ် :D ၊
၉) ၀က်သား ၊ အမဲသား ၊ ဆိတ်သား အရမ်းမုန်းပါတယ်။ အသီးအရွက်သိပ်ကြိုက်ပါတယ်။ အဲဒီအသားတွေ စားထားပြီးချိန်လူတစ်ယောက်ကို သွားပြန်မတိုက်ရသေးဘဲ စကားမပြောပါဘူး။ အစပ် ၊ အငံ လုံးဝမကြိုက်ပါ။ အထူးသဖြင့် မြန်မာတအားဆန်သော အိမ်မှဟင်းတွေ မစားနိုင်ပါ။ အဲဒီဒဏ်ကို ခံရတာက လင်းလက်နားမှာရှိတဲ့ မိဘနဲ့ ကိုကို :D ၊
၁၀) မြန်မာဆန်သောအလှကိုသိပ်မြတ်နိုးပေမယ့် ကိုယ်တိုင်တော့ ထဘီစကပ်သာဝတ်လေ့ရှိပါတယ်။ ထဘီအစစ်ပတ်ရင် ကျွတ်ကျတတ်လို့ပါ။
၁၁) အမှန်တရားကိုမြတ်နိုးသလို ၊ တရားမျှတမှုကို လိုလားသူ … ။ ဘယ်သူ့ကိုမှ မကြောက်တတ်ပေမယ့် ချွင်းချက်အနေနဲ့ ဖခင်အရင်းကိုတော့ ယောင်လို့တောင် မော်မကြည့်ရဲတဲ့ မိန်းကလေးတစ်ဦးပါ … ။ (ကျန်တဲ့သူတွေတော့ ဆောရီးနော်)
၁၂) ဖြစ်သင့်တာတွေချည်း လုပ်ပေးနေရလို့ ဖြစ်ချင်တာတွေမြုပ်နေတော့ တခါတလေ သောင်းကျန်းတတ်ပါတယ်။ ( ဘယ်ပစ္စည်းမှ ရိုက်ခွဲတာမဟုတ်ပါဘူး။ သီချင်းတွေအော်ဆိုတာပါ)
၁၃) ဓါတ်ပုံရိုက်တာ ၊ မော်ဒယ်ရှိုးသွားရတွေကို သိပ်ဝါသနာပါတယ်။
၁၄) အစားစားတာ တအားနည်းပေမယ့် တနေ့ကို ၇နာရီမှ ၈နာရီကြားတော့ အိပ်တတ်တယ်။ ညခင်းဘက် နောက်ကျမှ အိပ်လေ့ရှိပြီး မနက်အစောကြီး မထတတ်ပါဘူး။
၁၅) ကျောင်းမှာ ထိုင်းကလာတဲ့ မိန်းကလေးတွေနဲ့ မကြာခဏ စကားများသော မြန်မာအဖွဲ့ဝင် ( နိုင်ငံချင်းစကားနိုင်လုရင်း)
၁၆) အလိုလိုက်နားလည်ပေး ၊ ဖြစ်ချင်တာအားလုံးကို ဖြည့်ဆည်းပေးပြီး အမြဲအနားမှာရှိပေးတဲ့ ချစ်သူကို တအားဆိုးနွဲ့အနိုင်ကျင့်တတ်တဲ့ မိန်းကလေး :D :D
ကဲ သူများတက်လို့ ကိုယ်လည်း သိသလောက် လိုက်တက်ပြီးပြီ .. ။ဒီစကားတွေအားလုံးက အပျော်လေးတွေလည်း ပါသလို ရင်ထဲကလာတဲ့ ခံစားချက်အစစ်တွေလည်း ပါပါတယ် … ။ သူများထက် ထူးပြီး ၁၀ခု မဟုတ်ဘဲ ၁၆ခု ဖြစ်သွားတယ် :P။ သူများတွေလို တအားနောက်ပြီး မေ၇းတတ်တာတော့ ခွင့်လွှတ်ပါ .. ။ ဘလောခ့်ဂါတွေ တော်တော်များများတော့ တက်ပြီးပြီမို့ ဘယ်သူတွေ ပြုတ်ကျ ကျန်ရစ်နေလည်း မသိပါ .. ။ ဒါကြောင့် သိသလောက်ထဲကနေ ဆွဲခေါ်လိုက်ပါတယ် .. ။ လာလာ လိုက်တက်ကြ
၁) ခင်ဖို့ကောင်းတဲ့ မမနေနေနိုင်နဲ့ အကိုသီဟကျော်ဇော
၂) မန်းမြို့တော်မှ ကိုမျိုးကျော်ထွန်း
၄) ချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့ ညီမလေး မအိမွန်စိုး
၆) သူငယ်ချင်း မောင်သင်္ကြန်
၇) ခင်မင်ရတဲ့ ဘော်ဒါကြီး ကိုပုထုဇဉ်
၈) သတင်းစုံတဲ့ ကိုစိုးဇေယျ
၉) မျိုးချစ်စိတ်နဲ့ ခင်မင်စိတ်ရှိသော ကိုရန်အောင်
ကဲ ဘော်ဒါ ၉ယောက်တို့ေ၇ … ။ လိုက်တက်ကြနော် … ။ မတက်ရင် လာဆွဲမယ် .. ။
Posted by LIN LET KYAL SIN at 11:39 AM
Lone wa ma paung nel.
Kyauk phoe kaung tel sis.
(ko twe ko twe par pel)
လင်းလက်ရေ... ကျွန်တော်ရှာကြံပြီး ဆယ်ချက်ပြည့်အောင် ရေးထားပါတယ်၊ နောက်လူတွေတော့ tag မလုပ်ရသေးပါ။
နံပါတ်9ကတော့ အစ်ကိုနဲ့ ညီမနဲ့ ဆန့်ကျင်ဘက်ပဲ
၀က်သားဒုတ်ထိုးဆို ကြိုက်မှကြိုက် :D
၂) "မန်းမြို့တော်" မှ ကိုမျိုးကျော်ထွန်း
ပေါက်စီရမယ်။ ပေါက်စီရမယ် :P